Shiinaha Cotton Plain Long Sleeve Girl T-Shirt PY-GTC001 Soo-saar iyo Warshad | Pinyang
suuf cad oo gacmo dheer gabar shaati ah
1.Q Ma waxaad tahay warshad
Haa, Waxaan nahay xirfadlayaal soosaarayaasha dharka carruurta.
2.Q Miyaad aqbashaa amar yar?
J Haa, Waan aqbalnaa amar yar iyo amar maxkamadeed.
3. S Ma daabacan kartaa astaantayada?
Haa Haa. Waan daabacan karnaa macaamiisha.
4.Q Muddo intee le'eg ayuu baakadka qaadanayaa in la geeyo cinwaankayga?
J Waxay qaadataa qiyaastii 3-10 maalmood oo shaqo ah si ay cinwaankaaga ugu yimaadaan DHL, UPS, EMS, 4PX. Waxayna qaadataa qiyaastii 25-35 maalmood oo shaqo inaad ku timaaddo cinwaankaaga dhinaca badda.
5.QI waxaan rabaa qaabab badan, sideen ku heli karaa buugga ugu dambeeyay tixraaca?
J Waxaad nala soo xiriiri kartaa Maamulaha Ganacsiga ama Emailka, Waxaan ku siin doonnaa buugyarahayaga ugu dambeeyay sida ku xusan macluumaadkaaga.
6.Q Sidee ayaad u xakameysaa tayada?
J Waxaan diyaarin doonaa xaqiijinta muunada kahor soosaarka tirada badan. Inta lagu jiro wax soo saarka, waxaan leenahay shaqaale QC xirfadlayaal ah oo xakameynaya tayada iyo soosaarida si waafaqsan muunada la xaqiijiyay. Waxaan sidoo kale dammaanad ka qaadi doonnaa saxsanaanta baakadaha oo waxaan kuu soo diri doonaa muunad rar. Ku soo dhowow warshadeenna si aad u kormeerto.
7. S alaabooyinkaagu ma yihiin kuwo ku habboon deegaanka? Ma ubadbaa ubadkeena?
J Haa, alaabooyinkeenu waa bey'ad-saaxiibtinimo, waxay leeyihiin shahaadada SGS. caafimaad iyo badbaado ayey u tahay ilmahaaga.
Hore: Crew Neck Short Sleeve Wiil T-Shirt PY-TD001
Xiga: 8 Sano Jir Gabdhaha Gacanta Gaaban T-Shirt PY-GD001
Guga Iyo Fall Wiil Gacmo Dheer Long T-Shirt PY-TC002
8 Sano Jir Gabdhaha Gacanta Gaaban T-Shirt PY-GD001
Iibi Kulul Wiil Yar oo Gacmo Dheer ah T-Shirt PY-TC004
Qawaaniinta la adeegsan karo ee Gacanta Long T-Shirt P ...
Crew Neck Short Sleeve Wiil T-Shirt PY-TD001